မြန်မာ ဆန်ဆန် ဖက်ရှင်လေး မှာ အထင်းစား ပေါ်လွန်လှပ နေတဲ့ “မျက်ဝန်း” – Shwe Sar
မြန်မာ ဆန်ဆန် ဖက်ရှင်လေး မှာ အထင်းစား ပေါ်လွန်လှပ နေတဲ့ “မျက်ဝန်း”
By Shwe S NPosted on November 22, 2021 November 22, 2021
မြင်သူ တိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည် နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာမှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိ တာတွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေးတွေတိုင်း မှာ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ မြန်မာဆန်ဆန် ဖက်ရှင်လေးဝတ်ကာ ရိုးရိုးလေးပဲ ဝတ်ထားပါတယ် 💯ကိုကို့ ရင်တွေ အေးမြပါစေ🙏💜💯💚💯 ” caption လေးတဲ့ တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊
မော်ဒယ်မျက်ဝန်းရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တယ်နော်..။အခုလိုအဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်…နောက်များမှာလည်း အခုလိုဆယ်လီတို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေး သွားကြပါအုံးနော်….
မွငျသူ တိုငျးငေးလောကျ တဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျ ကောကျကွောငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မျောဒယျလျ မကျြဝနျး ကို သိကွမယျထငျပါတယျနျော။မျောဒယျလျလောကကိုဝငျရောကျတာ မကွာသေးပငျမဲ့ ပရိသတျအမြားအပွားရဲ့အားပေးဝနျးရံမှုကို တဖွညျးဖွညျးရရှိလာတဲ့ မျောဒယျဖွဈပါတယျ ယောကျြားလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ဝနျးရံ အားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမညျတဈလုံးနဲ့ ရပျတညျ နသေူ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ ဆကျဆီ ကပြွီး အမိုကျစား ပုံတှေ နဲ့ ညို့ အားပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျနိုငျ သူလေးဖွဈတာကွောငျ့ လကျရှိ ဖဘှေ့တျစာ မကျြနှာမှာ ရပေနျးစားလူကွိုကျမြားကာ ပုရိသတှေ ဝနျးရံနကွေတာ လညျးဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျတှေ ကို လူမှုကှနျ ယကျဖဘှေ့တျပျေါတှငျ အမြားဆုံး တငျလရှေိ့ တာတှရေ့ပါတယျ။ ပုံလေးတှတေိုငျး မှာ မျောဒယျမကျြဝနျး တဈယောကျ ဆှဲဆောငျမှု ရှိရှိနဲ့ လနျးလှနျးနတော လညျးဖွဈပါတယျ။ သူမကတေွာ့မွနျမာဆနျဆနျ ဖကျရှငျလေးဝတျကာ ရိုးရိုးလေးပဲ ဝတျထားပါတယျ 💯ကိုကို့ ရငျတှေ အေးမွပါစေ🙏💜💯💚💯 ” caption လေးတဲ့ တငျပေးလာတာပဲဖွဈပါတယျ၊၊
မျောဒယျမကျြဝနျးရဲ့ အလှပုံရိပျလေးတှကေို ပရိတျသတျတှေ အတှကျပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျတယျနျော..။အခုလိုအဆုံးထိ ဖတျရှုပေးတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ Page မှ အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော…နောကျမြားမှာလညျး အခုလိုဆယျလီတို့ရဲ့ သတငျးမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးပွညျပသတငျးမြားကို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီတငျဆကျပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျကြှနျတျောတို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပျပေး သှားကွပါအုံးနျော….
Previous post ကြည့်သူတိုင်း သဘောကျ သွားစေလောက်အောင်ကို အမိုက်စား ဖြစ်နေတဲ့ မေပန်းချီ
Next post တမူ ထူးခြားတဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မူ ရှိနေတဲ့ မိုးပွင့်ဖြူ